Haatanna Kia Motors ayaa ka muuqata goobta soo saarista gaariga Apple | Waxaan ka socdaa mac
Haatanna Kia Motors ayaa ka muuqata goobta soo saarista gaariga Apple
Ka dib markii ay warbixintu soo gashay shirarkii ay Apple la yeelatay Hyundai iyo markii dambe ee lala yeeshay Mercedes-Benz, hadda seddex meelood meel ayaa ka muuqda goobta: Matoorada Kia. Xogtu ma ahan mid gebi ahaanba cad waxayna umuuqataa taas Hyundai wuxuu mashruuca u furay shirkadda Kia Motors si ay iyadu ula wareegi karto qayb ka mid ah ama xitaa inay iyagu wax soo saarka gacanta ku hayaan.
Mar labaad dhexda iPhoneHacks wuxuu sharxayaa in haddii heshiiskan la xaqiijiyo, soo saarista baabuurkan ay ka dhici doonto Warshada Kia Motors ee West Point, Georgia. Haysashada dhirtaan gudaha Mareykanka waxay muhiim u noqon kartaa Apple, laakiin tan had iyo jeer waa warar xan ah iyo dillaacyo warbixino kala duwan sidaa darteed ma ahan rasmi.
Xaaladdan oo kale, warbixinta cusub ayaa lagu sii daayay websaydhka Kuuriya ee eDaily, taas oo qayb ka mid ah qorshayaasha Apple ee baabuurkan lagu faahfaahiyay. Runtu waa taas Waxaan ka hadleynay gaarigaan loo maleynayo inuu yahay Apple smart tan iyo dhamaadka 2020 iyo bilowga 2021 markaa waxaad moodaa in mawduuca uu yahay mid culus.
Ma jiraan taariikh rasmi ah oo ku saabsan bilowga suurtagalka ee wax soo saarka mana jiro war rasmi ah oo ku saabsan inuu ugu dambayn noqon doono baabuur ama uu si toos ah u noqon doono softiweer aan ugu dambayn ka arki doonno midka la yiraahdo "Project Titan" ee iska samir. Faahfaahin kale ayaa ah in falanqeeyayaasha sida Ming-Chi Kuo ay ka hadlayaan imaatinka gaarigaan dhowr sano gudahood, waxaa la yiri inta udhaxeysa 2025 ilaa 2027 markaa hadday run tahay waxaan haysannaa waqti nagu filan oo aan ku aragno wax rasmi ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Xanta » Haatanna Kia Motors ayaa ka muuqata goobta soo saarista gaariga Apple
Qallooca si loo soo saaro kaararka SIM-ka waa aaladda lagu sii daayo madaxa madaxa AirPods Max
Bateriga AirPods Max ayaa gabi ahaanba baxa habeenkii